Iimpawu, ukutya, indawo yokuhlala kunye nomnqweno we-goblin shark | Ngeentlanzi
Enye yookrebe abanemilo engaqhelekanga ngolu hlobo ehlabathini yi Shark. Igama layo sele lityhila uhlobo olungaqhelekanga kwaye, kwakamsinya nje uyabona, kuyothusa. Nangona ijongeka ngathi ngukrebe kwincwadi ethile yamaphupha, iyinyani. Kwaye kukuba kumaxesha amaninzi, inyani iyodlula intsomi kwaye yenye yazo. I-goblin shark ngoyokrebe wokwenene ofumaneka kubunzulu bolwandle.
Ngaba uyafuna ukwazi zonke iimfihlelo malunga nale shark ingaqhelekanga? Apha sichaza yonke into kuwe.
2 Amanqatha kunye nombala
3 Ukutya kunye nendawo yokuhlala
4 Ukuzaliswa kwakhona kunye nokuziphatha kwe-goblin shark
Ngokrebe one-morphology engaqhelekanga kwaye ungowosapho lakwaMitsukirinidae. Olu sapho luphelile, ngaphandle kwale ntlobo. Le krebe, nangona ikhangeleka intle, ayinkulu ngokungaqhelekanga. Ifikelela kwi-6 yeemitha ubude kwaye inobunzima ukuya kwi-700 kg. Ngenxa yokuba ihlala ezinzulwini zolwandle, kuye kwafuneka yenze ulungelelwaniso kwezi ndawo. Enye yazo kukuba ikwazi ukucinezela kamva ukuba inde kunokuba injalo kwaye icuthe. Oku kunceda ukuba ungene kwiindawo ezihle kakhulu zamatye kwaye ubambe amaxhoba abo.
Oku kukwazi ukucaba kuhamba kunye ne-morphology yomlomo wayo. Icabalele kwaye inde. Yimihlathi emide kakhulu kwaye ngezantsi kwayo ngumlomo okwaziyo ukuphuma ukuya kwiisentimitha ezininzi ngaphambili. Uqikelelo lwamazinyo akho luphakathi kwe-100 ne-120 phakathi komhlathi wonke. Le yindlela yahlulwe yangamazinyo angama-60 emazantsi kwaye malunga nama-50 kwinxalenye ephezulu. Kwinqanaba elisezantsi linamazinyo amaninzi kuba liyinxalenye yomhlathi owenza owona mzamo wokuguba.
Ubungakanani bala mazinyo buyahluka kwaye bukhule ngokuxhomekeke kwindlela aphuma ngayo. Ke, zibekwe kwimingxunya yomlomo kwaye zingahleliwe kwaphela. Amazinyo aphelela ekubeni afane ngokupheleleyo kwaye aneentlobo ezahlukeneyo zokuqina kunye nobukhulu.
Amanqatha kunye nombala
Amanqatha omqolo kunye ne-pectoral amancinci kwaye kulula ukuwabona kunamaphiko e-pelvic kunye neempundu. Kuwo wonke umzimba wayo inesikhumba esimhlophe esinamabala amancinci apinki. Umnqweno wesi silwanyana kukuba, xa unokuyibona kwiifoto, ipinki ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, oku akunjalo. Okwangoku, umbala wolusu lukakrebe uphantse wabomvu bumdaka ngokupheleleyo.
Umbala ophawu lubangelwa kukuba, ukuba noluhlu olucekeceke lolusu, imithambo yegazi ibonakala ngamehlo, ebanika lo mbala. Abanye abantu bayawubhidanisa lo mbala nenyani yokuba ukrebe ugcwele ligazi kumaxhoba alo. Oku kuyenza ibonakale iphazamisa kwaye iyingozi.
Ukutya kunye nendawo yokuhlala
Njengabo bonke ookrebe, igoblin shark luhlobo oluthile olunokutya okutyayo. Phakathi kokutya okuhlala rhoqo esikufumanayo oononkala, ii-cephalopods zalo naluphi na uhlobo, ezinye iimbatyisi kunye nezinye iintlanzi ezithunyelwa ngomnxeba. Zizilwanyana ezizingela ngokukhawuleza kwaye zoyikwa kakhulu.
Banokuzingela ixhoba labo ngenxa yemvakalelo ezi-3 ezisebenzisayo: ukubona, ukuvumba kunye nokubekwa ngombane. Phakathi kweempawu zayo ezahlukileyo kukuba ngumzingeli olungileyo ngaphandle kwesidingo sokukhawuleza ukubamba ixhoba. Uzolile, uyadada kancinci, kwaye usondela kwiinjongo zakhe ngokuthe chu. Elinye lamaqhinga abo kukuhamba ngaphandle kokuhamba kancinci kwemilenze yabo ukuze bangalumkisi ixhoba. Ngandlel 'ithile iintlanzi ezixhoba zikholelwa ukuba isilwanyana sifile kwaye siyasiwa ngumsinga. Ngokujonga nje kancinci, zibanjwa phakathi kwamazinyo.
Ngokubhekisele kwindawo yokuhlala kunye nendawo yokuhanjiswa, sifumanisa ukuba iyanda nge uLwandlekazi lweAtlantiki omabini amacandelo asempuma nasentshona, i-Indiya yasentshona kunye ne-Pacific yasentshona. Apho kuninzi kwaye kufumaneka kwiindawo zase-Australia ukuya kunxweme lwaseJapan. Kuzo zonke iziqithi ezincinci ezikuloo ndawo zinokufumaneka ngobuninzi.
Kubekho ukubonwa eMelika nakwiindawo zaseCalifornia. Ezinye izinto ezilahlekileyo ziye zabonwa eTaiwan nakumazantsi eAfrika. Oku kushwankathelwa phantse kuzo zonke iindawo zomhlaba. Indawo yokuhanjiswa kwayo iphezulu ukusukela Ayisosilwanyana esilinganiselwe kwindawo ethile yejografi. Oku kuyenza ukuba ibe ngumzingeli ongalindelekanga ngakumbi.
Ukuzaliswa kwakhona kunye nokuziphatha kwe-goblin shark
Le krebe luhlobo olungaqhelekanga noluphazamisayo kuba iba lukrebe olungahambeli ngaphezulu nje kwendawo enye. Ingasasazeka kwiindawo ezinkulu ngokuzikhethela. Ukuveliswa kwabo akaziwa kakuhle kuba bahlala ezinzulwini. Nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba zizilwanyana ezi-ovoviviparous. Oko kukuthi, nangona iisampulu zizalwe ngamaqanda, zikhula kwisibeleko sowasetyhini.
Iyakwazi ukufuduka imigama emide ukuze ikwazi ukudibana nezinye iisampulu ngexesha lesizini. Njengoko sele sibonile ngaphambili, ukuba luhlobo lokuhamba ludada simahla ukumangalisa amaxhoba, kufuneka bahambe baye kufuna umntu oza kuzala kwakhona. Akukho datha ininzi ngokuzala, kodwa ulwazi ngakumbi nangakumbi malunga nalo sele lufunyenwe. Kude kube ngoku isesisilwanyana esingaqondakaliyo.
Malunga nokuziphatha kwakhe, iyacotha, izolile kwaye ayinangqumbo njengabanye ookrebe. Eyona ntshukumo yakhe yomeleleyo yile ayenzayo ukuze axinanise izilwanyana. Ukuzingela, kuzingela ixhoba layo ekuseni kakhulu phambi kokuphuma kwelanga. Emntwini ayiyongozi kwaphela nangona ibonakala. Ukuba iyasiluma, inokubangela umonakalo omkhulu. Nangona kunjalo, Akukho mfuneko yokoyika okanye sengozini xa sikufutshane nomntu othile, kuba akazukusihlasela.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-goblin shark engaqondakaliyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Shark yaseGoblin